Ukuphakanyiswa kobuso kwiDikishonale.com | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 23, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndingumfundi onomdla, kodwa oyikekayo ngopelo, iziphumlisi kunye negrama. Ndiya entlokweni.com xa ndingafumani ukuba lithetha ntoni igama. Namhlanje xa ndifunda I-Chip's Quip on IPlenary Snark namhlanje, bendingazi ukuba yintoni le athetha ngayo. Ke, ndibhadule ndaya kwiDikishona.com kwaye bafumana ukuphakanyiswa kobuso. Ijongeka intle kodwa ndicinga ukuba bebe imibala kum, nangona kunjalo. (udlala)
Kwaye andikayiqondi ukuba yintoni iPlenary Snark. Kwafuneka ndiye kwiWikipedia ukuze ndikhangele i-snark, nayo. inqaku: inyoka+ukuthetha). Ndicinga ukuba ayihlekisi xa usisidenge.
Kodwa ke, Snakes kwi Plane ibukeka intle, huh?
Abathengi babuyele umva!
Ngaba iQela lingathatha imarike yevidiyo ekwi-intanethi?
Aug 23, 2006 ngo-4:28 PM
Aug 23, 2006 ngo-5:02 PM